Shina · Septambra, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Shina · Septambra, 2009
Tantara mikasika ny Shina tamin'ny Septambra, 2009
Sina: te-ho lasa “mpiasam-panjakana voatsolotra” ny zazavavy kely mpianatra
Fanabeazana 22 Septambra 2009
Nanadihady ankizy vitsivitsy ny amin'izay tanjon'izy ireo eo amin'ny fiainana ny gazety mpiseho isan'andro Southern Metropolitan any Guangzhou, ny andro voalohan'ny taom-pianarana vaovao any Sina. Nilaza ity zazavavy iray fa ny nofiny dia ny ho lasa " mpiasam-panjakana voatsolotra"
Shina: Mpianatra ao Beijing manohitra ny hanao famerenana mitabe
Hong Kong (Shina) 22 Septambra 2009
Satria moa efa mihamanakaiky ny 1 Oktobra hankalazana ny faha-60 taonan'ny Repoblika entim-bahoakan'i Shina, dia netsehina hanao mitabe ho amin'izany fotoan-dehibe izany ny mpianatra avy amin'ny lisea sy ny Anjerimanontolo mihoatra ny iray hetsy ao Beijing. Misy ny mpianatra tsy faly loatra satria tsy maintsy manao mitabe avokoa ny mpianatra...
Sina: Fanomezan-danja ny fitiavan-tanindrazana Han
Fanoherana 22 Septambra 2009
"Tao anatin'ny Fandaharan'asan'ny antoko komionista sinoa, tsy ny foko vitsy an'isa ihany no tsy nanana zo ara-pivavahana fa ny avy amin'ny maro an'isa Han koa aza...Amin'ny maha teraka Han sy nanalehibiazana ahy teto Sina, tsy mahita izany antsoina hoe fitiavan-tanindrazana mihoam-pampana Han izany izahay!"
Sina sy Japana: Fanehoan-kevitry ny Sinoa mikasika ny fifidianana Japoney
Japana 09 Septambra 2009
Nandresy tamin'ny vokatra ankapobeny tamin'ny fifidianan'ny 30 Aogositra ny Antoko Demokratikan'i Japan (DPJ), izay namarana ny 50 taona maherin'ny fitondrana tsy ankizaran'ny Antoko Liberaly Demokraty (LDP) nanomboka tamin'ny 1955. Ny fandresen'i Yukio Hatoyama- mpitarika ny DPJ dia noraisina ho toy ny fiandohana vanimpotoana vaovao amin'ny politika Japoney. Lavitr'izay ho vokatr'izy...